ထေရဝါဒ တိုက်ပွဲ- ဝီရသူ(မစိုးရိမ်) ~ ထေရဝါဒ တို့တိုင်းပြည်
Boddha - Images
မြတ်ဗုဒ္ဓ ဩဝါဒ ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ အလုပ်ဟာ ပြန်တွေးလိုက်တိုင်း ကောင်းကျိုးဖြစ်စေမယ်
နောင်တမရစေဘူးဆိုရင် ဒီလိုအလုပ်မျိုးကို ဆက်လုပ်ပါ။
အိမ်ဦးခန်း၌ မစင်တက်စွန့်သော ခွေးကို အိမ်ရှင်က ရိုက်ရာတွင်
အိမ်ရှင်၏ အပြစ်မဟုတ်။ ရိုင်းပျသော ခွေး၏ အပြစ်သာ ဖြစ်ချေ၏။
ပြစ်မူကျူးလွန်သူကို ထိုက်တန်သည့် ဒဏ်ချရာ၌ တရားစီရင်သူ၏
အပြစ်မဟုတ်၊ ဒုစရိုက်ကောင်၏ အပြစ်သာ ဖြစ်ချေ၏။
ထိုနည်းတူစွာပင် ဓမ္မကို စော်ကားလာသူကို သုတ်သင်ရာ၌
သုတ်သင်သူ၏ အပြစ်မဟုတ်၊ စော်ကားသူ၏ အပြစ်သာ ဖြစ်ချေ၏။
ဗုဒ္ဓကို စွပ်စွဲလာ၍ ဒဏ်ခတ်ရာ၌ ဒဏ်ခတ်သူ၏ အပြစ်မဟုတ်၊
စွပ်စွဲသူ၏ အပြစ်သာ ဖြစ်ချေ၏။
ထို့ကြောင့် အရေးမခံချင်၊ အသုတ်သင်မခံချင်၊
ဒဏ်ခတ် မခံချင်လျှင် ဗုဒ္ဓကို မစွပ်စွဲသင့်ကြချေ၊
ဗုဒ္ဓ ရှင်မြတ် ဟောထားအပ်သော ပိဋကတ််ကျမ်းစာ မညီရာတို့ကို မျက်နှာထောက်ထား မသနားနှင့် စာအား ငွေအား
ဖြန့်ဝေအားဖြင့် တပါးဆယ်ယောက် တစ်ယောက်ဆယ်ပါး ပြန့်ပွါး နှံ့စပ်
လူ့ရပ် မြေကုန် ဝိုင်းအုံ ပထုတ်
ဤ web-site သည် ဗုဒ္ဓဘုရား၏ မေတ္တာရိပ်အောက်တွင် တည်ရှိပါသောကြောင့် ရောက်လာသူအားလုံး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ချမ်းသာ ရှိကြပါစေ
ထေရဝါဒ တိုက်ပွဲ- ဝီရသူ(မစိုးရိမ်)
10:20 PM ဝီရသူ(မစိုးရိမ်)2comments
တန့်ကြည်တောင် ရိပ်သာက တိရိစ္ဆာန်တို့ရဲ့ အမူအရာပေါင်းစုံ၊ တရားထိုင်ရင်း ငို ရယ်နေတာတွေ၊ ကနေတာတွေကို ရိုက်ထားတဲ့ခွေ ကို ကြည့်ရှူနိုင်ပြီဖြစ်သလို ဆရာတော်ဦးဝီရသူရဲ့ တန့်ကြည်တောင်
ဝါဒအကြောင်း စာအုပ်ကိုပါ ဒေါင်းယူဖတ်ရှူနိုင်ပါပြီ
ေအာက္က Link မွာလည္း ေဒါင္းယူၾကည္႔ရွဴႏုိင္ပါသည္
တချို့ကြည့်ပြီးသား ပုဂ္ဂိုလ်များက ဒါကိုကြည့်ပြီး ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်အဖြစ် လာရောက်
မေးမြန်းကြပါသည်။ တရားထိုင်တဲ့ ဤခွေထဲကအတိုင်း တကယ်ဖြစ်သလား စသည်
စသည်ဖြင့် မေးလာကြပါသည်။ တရားထိုင်တဲ့အခါမှာ ငိုမှု့ ရယ်မှု့တွေ အနည်းအကျဉ်းတော့ ဖြစ်တတ်ကြပါသည်။ ပီတိ ကြောင့် မျက်ရည်ကြခြင်း၊ ငိုခြင်း စသည်တို့လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီခွေထဲကအတိုင်း ရုပ်ပျက် ဆင်းပျက် ငိုတာမျိုးတွေတော့ မရှိပါဘူး။
မဟာစည်၊ မိုးကုတ် စတဲ့ နာမည်ကြီး ရိပ်သာတွေမှာ ဤခွေထဲကအတိုင်း ဖြစ်သလားဆိုတာ စာဖတ်သူကိုယ်တိုင် သွားရောက်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
ယခု အခွေသည် ပြင်ပမှ တစုံတစ်ယောက်က ရိုက်ထားသောခွေမဟုတ်ပါ။ တန့်ကြည်ရိပ်သာက
သူတို့ကိုယ်တိုင် ရိုက်ကူးပြီးတော့ ဖြန့်ချီတဲ့ခွေဖြစ်ပါသည်။ ဤခွေထဲမှာ ပါသော ကနေတာတွေ ခွေးလိုအမူအရာ၊ မြွေလိုအမူအရာ စတာတွေနဲ့ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေဟာ ဝဋ်ကြွေးပေးဆပ်တယ်၊ တရားထူးတက်တယ် စသည်ဖြင့် တန့်ကြည်တောင် ဆရာတော် ဦးသောမဗုဒ္ဓိ
ကိုယ်တိုင် ဟောပြော၍ လူထုပရိတ်သတ်ကို စည်းရုံးထားတဲ့ ခွေဖြစ်ပါတယ်။
လူစင်စစ်က လူစိတ်ပျောက်ပြီး တိရိစ ္ဆာန်အမူအရာမျိုးစုံနဲ့ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေက တိရိစ ္ဆာန်
တရားပဲဖြစ်မှာပါ၊ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားမဟုတ်တာတော့ အသေအချာပါပဲ။
မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာကို ဖျက်ဆီးထားတဲ့အတွက် 1999 ခုနှစ်မှာ မန ္တလေး၊
မစိုးရိမ်တိုက်သစ်မှ ဆရာတော် ဦးဝိစိတ္တာဘိဝံသ (ဝီရသူ) မစိုးရိမ်မှ ထေရဝါဒ တိုက်ပွဲ
ဟူသော စာအုပ်ဖြင့် ထိုဝါဒဆိုးကြီးကို ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ အတွက်ကြောင့် 24.12.2000
ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက ဆရာတော်ကြီးများ ရှေ့မှောက်မှာ ဝန်ခံကတိပြု
လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး တန့်ကြည်တောင် ရိပ်သာကို ပိတ်သိမ်းသွားပါတယ်။
သို့ပါသော်လည်း ယခုအခါ တန့်ကြည်တောင် သည် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြန်လည်
ပေါ်ထွန်းလာသည့်အတွက် ယခုအခွေအား အွန်လိုင်းပေါ် တင်ပေးလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
တန့်ကြည်တောင် ရိပ်သာ ရှိတဲ့မြို့များကတော့
တန့်ကြည်တောင် ရိပ်သာ (ပုဂံ၊ ညောင်ဦး) ပင်မရိပ်သာ
တန့်ကြည်တောင်ရိပ်သာ (မန ္တလေး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်)
တန့်ကြည်တောင်ရိပ်သာ (ရန်ကုန်၊ မင်္ဂလာဒုံ) တို့ ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် ဝါဒဆိုးကြီးအောက်သို့ မသက်ရောက်မိစေရန်
ရှင်းလင်းထားသော စာအုပ်ကို အွန်လိုင်းမှ အောက်တွင် တိုက်ရိုက်ဖတ်ရှူနိုင်သလို ဒေါင်းယူနိုင်ပါသည်။
Unknown November 5, 2012 at 10:20 AM
ဗုဒၶသာႆနံ စိရံ တိဌတု
Unknown May 22, 2013 at 10:06 AM
ွွဆရာေတာ္ဝီရသူရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို တပည္႕ေတာ္ ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္ဘုရား
ဓမၼကုိ အဓမၼ ကေစာ္ကားလာတိုင္း တြန္းလွန္ဖယ္ရွားရမွာ ဓမၼဝါဒီေတြရဲ႕တာဝန္ပါဘုရား။ ဒီေနရာ ဘာသာဆုိတဲ့ အမည္ကိုမစြဲကိုင္လုိပါဘုရား။ ေလာကမွာ ဓမၼနဲ႕အဓမၼ၊ သမၼာဝါဒနဲ႕ မိစၦာဝါဒ ႏွစ္မ်ဳိးပဲရိွတယ္လုိ႕ တပည္႕ေတာ္ခံယူပါတယ္ဘုရား။ ဓမၼက ေလာကၾကီးကို ေအးခ်မ္းသာယာေစ ၿပီးႏွလုံးသားကို သန္႕ရွင္းးေစပါတယ္ဘုရား။အဓမၼ ကေတာ့ ဓမၼနဲ႕ဆန္႕က်င္ဘက္ပါ၊၊အဓမၼ ကိုႏွိမ္နင္းရာမွာ ေမတၱာတရားက ႏွလုံးသားႏူးညံ႕ၿပီး ဆိုဆုံးမလြယ္သူေတြ အတြက္ လုိ႕ခံယူမိပါတယ္ဘုရား။ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ ေျဖရွင္းသလုိ ရွင္းရတဲ့အခါလည္းရွိပါတယ္ဘုရား။ဒီရွင္းနည္းကေတာ့ ဆိုဆုံးမမလြယ္တဲ့ ေကာက္က်စ္တဲ့ စိတ္ရိွသူေတြအတြက္ပါဘုရား။အဓမၼ ဆုိလ်င္ မည္သည့္ဘာသာဝါဒ ခံယူသူၿဖစ္ပါေစရွင္းရမွာ ဓမၼကိုတန္ဖိုးထားၿမတ္ႏုိးသူတို႕ရဲ႕တာဝန္ပါ။
ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ပညာရှင်ဆန်ဆန် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ comment ပေးမယ်လို့
တင်ပြီးခဲ့သမျှ August (11) September (13) March (3) February (2) January (2) November (1) September (11) August (16) May (1) April (1) March (2) December (2) September (3) June (1) November (1) October (2) September (1) August (1) July (2) June (1) May (4) March (3) February (3) January (5) December (7) November (16) October (20) September (3) April (1)
Boddha - Images (1)
ခရီးသွား ဆောင်းပါး (6)
ဓမ္မ စာအုပ်များ (3)
ဘာသာရေး သုတ (39)
မဇ္စျိမဒေသမှ လေ့လာစရာများ (27)
မိစ္ဆာ ဒိဌိများ (4)
သာသနာပ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု့များ (4)
အဓမ္မဝါဒ ဓမ္မစေတီ (6)
အဓမ္မဝါဒ မိုးပြာ (16)
Blog Archive August (11) September (13) March (3) February (2) January (2) November (1) September (11) August (16) May (1) April (1) March (2) December (2) September (3) June (1) November (1) October (2) September (1) August (1) July (2) June (1) May (4) March (3) February (3) January (5) December (7) November (16) October (20) September (3) April (1)
အခ်ဳိ႔ေသာ စာအုပ္မ်ားသည္ link ပ်က္သြားေသာေၾကာင္႔ ေဒါင္း၍ အဆင္မေျပ ရွိတတ္ပါသည္။ ဘာသာေရးႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ အလုိရွိေသာ စာအုပ္ကုိ စာေရးဆရာအမည္နဲ...
တန့်ကြည်တောင် ရိပ်သာက တိရိစ္ဆာန်တို့ရဲ့ အမူအရာပေါင်းစုံ၊ တရားထိုင်ရင်း ငို ရယ်နေတာတွေ၊ ကနေတာတွေကို ရိုက်ထားတဲ့ခွေ ကို ကြည့်ရှူနိုင်ပြီဖြစ်သ...
လူလိမ်တွေ ပွေလီရှုပ် တန့်ကြည်တောင်ဇာတ်ထုတ်
တန့်ကြည်တောင် ရိပ်သာက တိရိစ္ဆာန်တို့ရဲ့ အမူအရာပေါင်းစုံ၊ တရားထိုင်ရင်း ငို ရယ်နေတာတွေ၊ ကနေတာတွေကို ရိုက်ထားတဲ့ခွေ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရောက်ရှိ...
ဓမ္မ နှင့် အဓမ္မတို့၏ သဘာဝချိန်ခွင်
‌လောကကိုစောင့်သော လောကပါလ နတ်များသည် သဘာဝချိန်ခွင်၌ ဓမ္မကို တစ်ဖက် အဓမ္မကို တစ်ဖက် အမြဲတန်း ချိန်နေကြ၏။ အဓမ္မဘက်က အလေးသာလျှင် လောကသည် ဆူပွက်...
မဇ္ဈိမဒေသမှ လေ့လာစရာ နေရာဒေသများ - ၃ (ဗုဒ္ဓဂယာ)
မဟာဗောဓိစေတီ ဗုဒ္ဓဂယာ ဒေသတွင်ရှိသော မဟာဗောဓိစေတီတော်ကြီးမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် စေတီတော်ကြီးတစ်ဆူ ဖြစ်ပါသည်။ မဟာဗောဓိပင် နှင့် ပလ္လင်တော် ...
ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တို့ အတွက် အမြင်မရှင်းသည့် မေးခွန်းများ
၁. ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို မဖန်ဆင်းခင်က ထာဝရ ဘုရားသခင် ဘယ်မှာနေပါသနည်း? ၂. ထာဝရဘုရား ကို မည်သူဖန်ဆင်း ခဲ့သနည်း? ထာဝရ ဘုရားသခင်အဖြစ်သို့ ရေ...
၁။ အာနာပါန ဒီပနီ ၂။ ပါရမီ ဒီပနီ ၃။ သမၼာဒိ႒ိ ဒီပနီ ၄။ သာသနာ႔၀ိေသာဓနီက်မ္း-ပထမတြဲ ၅။ သာသနာ႔၀ိေသာဓနီက်မ္း-ဒုတိယတြဲ ၆။ သာသနာ႔၀ိ...
ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ သမိုင်းအမွေနှစ်များ တည်ရှိခဲ့ရာ တောင်တန်းဒေသများသို့ ခရီးသွားမှတ်တမ်း ( ၂ )
စာရေးသူတို့ အဖွဲ့သည် Kaudol တောင်ကုန်းများကို လေ့လာပြီးနောက် ဗာရာဗာရနှင့် နဂရဇ္ဇုနိကုန်းများ ရှိရာအရပ်သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွါဖြစ်ကြသည်။ လမ်းဘေးဝဲ...
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘုံဘိုင်မြို့မှာ ပညာရှင်ပေါင်းများစွာရဲ့ အမေးတွေကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြေကြားခဲ့တဲ့ ဆရာတော် အရှင်အရိယဓမ္မရဲ...
အခုလို လာလည်တဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေကို ကြိုဆိုပါတယ်
Dhamma web-site များ
Myanmar Unicode Standard Version Code Chart
ကွန်ပျူတာ Softwere များ
MYANMAR UNICODE® Font
ဤ Web- site အတွင်းရှိ
Copyright © ထေရဝါဒ တို့တိုင်းပြည် | Powered by Blogger